ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံများစာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Cambodia ၁၃,၇၀၁,၆၆၀ ၉၆.၉၀ %
Thailand ၆၄,၄၁၉,၈၄၀ ၉၃.၂၀ %
Myanmar ၄၈,၄၁၅,၉၆၀ ၈၇.၉၀ %
Bhutan ၅၆၃,၀၀၀ ၇၄.၇၀ %
Sri Lanka ၁၄,၂၂၂,၈၄၄ ၇၀.၂ % 
Laos ၄,၀၉၂,၀၀၀ ၆၆.၀၀ %
Mongolia ၁,၅၂၀,၇၆၀ ၅၅.၁၀ %
Japan ၈၄,၆၅၃,၀၀၀ သို့ ၄၅,၈၀၇,၄၈၀ ၆၇% သို့ ၃၆.၂%
Singapore ၁,၇၂၅,၅၁၀ ၃၃.၉၀ %
Taiwan ၈,၀၀၀,၀၀၀ သို့ ၄,၉၄၅,၆၀၀ ၃၅% သို့ ၂၁.၁%
Nepal ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀% သို့ ၁၂%
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် % ၁။ Pew Archived 19 February 2018 at the Wayback Machine., ၂။ ARDA.
Afghanistan ၂၄,၁၀၈,၀၇၇ < ၀.၁%
Angola 18,565,269 < 0.1%
Austria 221,646 0.2%
Belize 297 0.5%
People's Republic of China 1,349,585,838 18.2% 244,130,000
မြောက်မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ 2,087,171 < 0.1%
Philippines 98,215,000 1,964,300
Thailand 67,448,120 93.2% 13,701,660
UK 63,395,574 0.4%
USA 316,668,567 1.2% 1,200,000
VIR 104,737 < 0.1%
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံ ဆယ်ခု[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012)၊ The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 (PDF)၊ Pew Research Center၊9March 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊9October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ ၆.၀ ၆.၁ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။9June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA's The World Factbook: Populations as of July 2013။ 17 May 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CIA FactBook Archived7January 2019 at the Wayback Machine.
adherents.com Archived 14 November 2016 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံအလိုက်_ဗုဒ္ဓဘာသာ&oldid=730163" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။